UNgcongca ugcine esayine inkontileka entsha kwiDowns
UMDLALI wasemuva weMamelodi Sundowns * -Anele Ngcongca ugcine eyisayinile inkontileka entsha neqembu Isithombe: BACKPAGEPIX
ZAKHELE XABA | June 3, 2020
LUGCINE lugobile uphondo kumdlali wasemuva weMamelodi Sundowns, u-Anele Ngcongca, wavuma ukuvuselela inkontileka ngonyaka eChloorkop.
Izindaba zokuvuselela kukaNgcongca zidalulwe yimenenja yakhe, uMike Makaab.
Izolo, iSundowns imemezele ukuthi igixabeze uThapelo Morena, obanga indawo noNgcogca, inkontileka yeminyaka eyisihlanu.
Leli qembu liphinde layivuselela ngeminyaka elinganayo inkontileka kaGaston Sirino.
Ekuqaleni kwesonto leli phephandaba libike ukuthi AmaBrazilians avuselele inkontileka yephini lomqeqeshi uManqoba Mngqithi ngeminyaka emine.
Ngesonto eledlule kuvele ukuthi kuphambene imibono phakathi kukaNgcongca neSundowns ngeminyaka okufanele ayisayine. UNgcongca kuthiwa ufuna iminyaka emibili kuya phezulu ekubeni iSundowns ifuna ukumnika owodwa kuphela.
“UNgcongca welule inkontileka yakhe ngonyaka kwiSundowns,” kushaya ngamafuphi uMakaab ekhala ngokuxineka emihlanganweni.
UNgcongca uvuselele nje, ubekade ecashunwe ethi uncamela ukubuyela phesheya kunokusayina inkontileka yonyaka kwiSundowns.
UMorena, osalulama kulandela ukulimala kabi eqakaleni, noSirino, olindwe wukudonsa isigwebo ngemuva kokulahlwa yicala lokushaya abadlali beSuperSport United, bajabulile ngokunikezwa eminye iminyaka eChloorkop. Izinkontileka zabo zizophela ngo-2025.
“Masandawana, ngiyajabula ukunazisa ukuthi sengelule inkontileka yami neMamelodi Sundowns. Lude ukhalo esisazoluhamba nezindebe eziningi esisazoziwina. Ka Bo Yellow!,” kusho uMorena esitatimendeni seSundowns.
USirino wase-Uruguay, uthe umndeni wakhe usuzinzile eNingizimu Afrika, wathi inkontileka entsha imnika ugqozi lokuzimisela kakhulu enkundleni